Umphumela Wezixazululo Zokukhokha Eziphephile Ekuthengeni Ku-inthanethi | Martech Zone
Uma kukhulunywa ngokuthenga online, isimilo se-shopper sehlela ezintweni ezithile ezibucayi:
Desire - noma ngabe umsebenzisi udinga noma ufuna into ethengiswa ku-inthanethi noma cha.
Inani - noma ngabe izindleko zento ziyehlulwa yileso sifiso.
Product - noma ngabe umkhiqizo ukhangisiwe noma cha, ngezibuyekezo zivame ukusiza esinqumweni.
Trust - noma ngabe umthengisi othenga kuye angathembeki… kusuka ekukhokheni, ekulethweni, ekubuyiseni, njll.
Ukwesaba ukuthenga ku-inthanethi kunqotshiwe eminyakeni embalwa edlule, ngisho nakumadivayisi eselula. Kodwa-ke, isilinganiso sokushiywa kwenqola esijwayelekile singama-68.63%, okunikeza ithuba eliningi kakhulu kubathengisi be-ecommerce ukukhulisa nokwenza ngcono isipiliyoni sabo online. Isilinganiso se-shopper yase-UK sisebenzise isilinganiso esingu- £ 1247.12 (ngaphezulu kwe- $ 1,550 US) ngo-2015 futhi leyo ngqikithi iyaqhubeka nokwanda!
Vele, akusizona zonke izivakashi ezibeka umkhiqizo enqoleni okufanele zithathwe njengomthengi. Imvamisa ngiphuma ngiye endaweni yokuthenga ukuyengeza uhlu lwezinto ukubona nje ukuthi ingakanani inani lentela nokuthunyelwa kuzoba… khona-ke ngizobuya lapho isabelomali sikhona bese ngithenga uqobo. Kepha ngaphakathi kwalelo zinga lokushiya, abaningi bashiye kuphela ngoba bengatholanga isayithi lithembekile.
Abathengi bafuna inqubo yokukhokha evikelekile, esheshayo nelula, njengoba kuchaziwe ku-infographic ephathekayo engezansi. Gwema ukukhathazeka ngokuphepha kokukhokha kanye nokuphuma okude nokudidayo, futhi ekugcineni ukhethe isango lokukhokha eliqinile lebhizinisi lakho eliku-inthanethi elizosiza ekuletheni abathengi abajabulayo! Bheka i-infographic ye-Total Processing ngezansi, I-Saga Ye-Online Shopper: Ekufuneni Isixazululo Sokukhokha Okuvikelekile.
Empandeni yawo kungokwakho ukukhokha inkokhelo. Uma umthengi eqala ukubheka isiza esisha futhi engazizwa ethembekile noma eyinkimbinkimbi kakhulu, ngeke babe sengozini yokufaka imininingwane yekhadi lakhe lesikweletu. Eqinisweni, ukukhathazeka ngokuphepha kokukhokha kubangela ukuthi i-15% yokulahlwa kwenqola yokuthenga kumasayithi we-ecommerce. Bazolahla bathole umkhiqizo kwenye indawo. Isayithi lomuntuincintisana naye lingabiza kakhulu… kepha uma zikhululeke ngokwengeziwe, ngeke zikukhathalele ukukhokha amadola ambalwa.
Ukucubungula okuphelele kuveza izici ezibalulekile ezi-4 ezenza isango lokukhokha eliqinile
Isango lokukhokha linikeza amakhasimende ububanzi uhlu lwezinketho zokukhokha.
Isango lokukhokha linikeza umthengisi i- uhlu lwamathuluzi wokuthuthukisa ukuthengiselana ukunweba iminikelo.
Isango lokukhokha linamandla ukuphathwa kwezinhlekelele nokukhwabanisa njengesisekelo somsamo waso.
Isango lokukhokha liyaqhubeka noku khipha iminikelo emisha ezihambisana nokushintsha okwenziwe online.
Tags: izinga lokushiyaisilinganiso esichithwe ku-inthanethiamazinga wokuguqulwaikhodi yekhuphoniezokuhweba ngekhompyuthaizibalo ze-ecommerceukuthunyelwa okucacileukukhwabanisaamazinga wokuguqulwa komhlabaukuthengwa kwe-inthanethiizinketho zokukhokhaukuphepha kokukhokhaukulawulwa kwezinhlekeleleInqola yokuthengaukulahlwa kwenqola yokuthengaukuchitha inthanethiukucutshungulwa okupheleleuki-United Kingdom